Ronaldo ayaa bixiyey faraantigii khuduubada ee ugu qaalisanaa ee ciyaaryahan kubada cagta bixiyo… – Hagaag.com
Posted on 15 Seteembar 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Waxay u muuqata in xiddiga reer Portugal Cristiano Ronaldo oo ah gooldhaliyaha Juventus, uu doonaya inuu hogaamiye ka noqdo banaanka garoomada lagu ciyaaro sida uu ku sameeyo gudaheeda, wuxuu noqday ninka faraantiga boos xirashada ama khaduubada ee ugu qaalisan ee ciyaaryahan kubada cagta uu siiyo saaxiibtiis.
Sida laga soo xigtay wargeyska Ingriiska “THE SUN”, kabtanka reer Portugal wuxuu ku bixiyey 791,000 doolar faraantiga oo dheeman ah oo uu ugu deeqay saaxiibtiis, gabadha Isbaanishka ee model-ka xayeysiisa, Georgina Rodriguez.
Ronaldo ayaa ka kor maray goolhayihii Everton iyo England Jordan Pickford, oo xaaskiisa Megan Davison siiyay faraantiga boos xirashada oo lagu qiyaasay $643,000, halka kaalinta saddexaadna uu fadhiyo xiddigii hore ee kubada cagta Ingriiska Ashley Cole, kaasoo lagu qiyaasay qiimaha faraantiga khuduubada ee uu siiyay xaaskiisii ​​hore $354,000.
Waxaa xusid mudan in Ronaldo uu la kulmay Georgina dhamaadkii 2016 hadana waxay korinayaan 4 caruur ah, Alana (labo sano), mataanaha Eva iyo Matteo (3 sano jir) iyo Cristiano Junior (10 sano jir).
Ciyaaryahanka ayaa bixiyay boqolaal kun oo doolar oo gargaar lacageed ah si looga hortago faafitaanka cudurka Corona, wuxuu hore u sheegay in Georgina “ay tahay jacaylkiisa noloshiisa isla markaana ay maalin uun isguursan doonaan oo ay tahay hooyo ku haboon caruurtiisa.”